"Aide-moi amin'ny Soso-kevitra Hampiroboroboana ny tsirinaina Varotra" (4)
Posted by: Anie Anokuru Novambra 13, 2013
Raha tsorina,, Nizeriana lalàna niketrona ho zava-dehibe amin'ny fivarotana na fanondranana ny olombelona, vatana faritra, ary koa ny tsiranoka izay avy aminy toy izany. Fantatro fa misy lalàna mifehy ny tsirinaina fanomezana (mifototra amin'ny fandaminana ny ankamaroany handraisam-bola sy ny varotra any aoriana toe-javatra) amin'ny hafa firenena, toy ny Etazonia sy ny firenena ny Eoropa. Toy izany climes, lalàna mifehy ny tsirinaina fanomezana na dia miresaka olana toy ny azo atao fanonerana na fandoavam-bola, zo sy ny andraikitry ny mpamatsy vola niteraka mankany ny taranany; ny ankizy ny zo hahalala ny na ny maha-drainy, sy ny fomba fanatanterahana ny olana. Matetika izy ireo no mametra ny isan'ny vohoka izay navela avy amin'ny iray mpanome fanampiana amin'ny ankapobeny. Izany no natao ho zavatra izay mitoetra ao amin'ny faritra ny saina any Nizeria – Ny firaketana ny tsirinaina foibe mpamatsy vola.
Out any, ny olona izay manao misy tsirinaina toy ny mpamatsy vola very ara-dalàna rehetra sy ny zo hafa ny vokatra biolojika ankizy amin'ny tsirilahy. Na dia izany aza, ao anatin'ny sasany juridictions, Misy fandaharana manokana dia mety hanome toerana ho an'ny nanaiky sasany endriky ny mpiara-fitaizana. Ny enforceability ny fifanarahana toy izany miovaova ny fahefana.
Ireo rehetra ireo no 'Un-Nizeriana', ary tsy misy na dia homena nihevitra eto ao anatin'ny hoavy akaiky indrindra. Noho izany, izay endriky ny antoko fahatelo miteraka na impregnating ny vehivavy izay tsy voatery ho olona fantatra firaisana ara-nofo dia azo antoka fa hanangana mpiara-miasa mihoatra noho ny maso-brows in Nizeria.
Place ny fivavahana
Fantatro fa fanomezana tsirinaina voarara ao Islam. Fivavahana Katolika mitsipaka amin'ny fomba ofisialy ny fampiasana ny mpamatsy vola tsirinaina ny antony fa mihazakazaka mifanohitra amin'ny ara-nofo firaisan-tsaina ny mpivady fifandraisana. Ireo mpikambana ao amin'ny finoana kristianina io mihazona mafy ny hevitra hoe ny fiterahana ny olombelona ho tonga toy ny vokatry ny "ny vokatry ny asa panambadiana manokana ny fitiavana eo amin'ny mpivady". Na dia vondrona ara-pivavahana sasany izay mora 'mijery ny fomba hafa' ny tsirilahy fanomezana fotsiny amin'ny maha-olombelona antony, fomba ofisialy ankapobeny ireo foana izany tsirinaina fanomezana avy amin'ny antoko fahatelo mijanona ho fandikan-dalàna ny mpivady fatorana. Anisan'ireo vondrona ara-pinoana dia Mantra fa "amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra azo atao". Raha mieritreritra ny tombontsoany no nofidiny, insemination na antoko fahatelo miteraka, tsy mitaratra fisalasalana sy ny tsy finoana ao amin'ny herin 'ny Tsitoha Andriamanitra, miresaka tsy ny impregnating ny vehivavy izay tsy voatery ho olona ny firaisana ara-nofo ara-dalàna fantatra mpiara-miasa, izay hiheverany ny ota sy ny zava-betaveta na dia.
Raha ny etsy ambony mifandray amin'ny fanomezana fotsiny tsirilahy, Tsy fantatro na vondrona ara-pivavahana izay manome ataovy mihatohatoka ny olana ny handeha lavitra kokoa ny dingana, nihazona ny varotra amin'ny tsirilahy. Ny olana tsy tokony ho voalaza, izay rehetra ao anatin'ny vondrona ireo mazava tsara mihevitra azy io ho takatry ny saina. Raha tsy misy ny fivavahana 'tsy mihazona rano' eo ireo izay tia ny snick ankehitriny any fahavokarana toeram-pitsaboana noho ny antony ny tsirinaina varotra, ny toro-hevitra toy izany mbola "hojerentsika izay ny fivavahana momba fanomezana tsirinaina ary na dia nahazo vola avy amin'ny fanomezana azy io".
Tips amin'ny fisondrotana, raha ilaina
Mpamaky dia tokony tsy hanaja ahy toy ny tsy mifanaraka amin'ny alalan'ny fanomezana toro-hevitra amin'ny fampiroboroboana eto. Aho manao izany noho ny antony roa. Voalohany, mba hiaina mifanaraka ny teniko amin'ny 'manao zavatra' mankany amin'ny tsara setrin'ny mpiantso 'fangatahana izay nahatonga io lahatsoratra io (mariho tsara anaram-boninahitra); ary faharoa, mba hampiasa izay mampita eto toy ny prompter ny mifandray sampan-draharaha misahana ny fampiharana ny lalàna, toy ny toro-hevitra mba nip tsirinaina raharaham-barotra tany amin'ny kiboriny, eo anoloany lasa ny nalaza. Ao amin'io fihadiana, ity teny nindramina avy aloha soraty-up, "Marketing Mix: Etika ny zaza toy ny vokatra "tokony homarihina: "Araka ny fomba maoderina ny curtailing heloka dia mamporisika 'Fandresen-dahatra toy ny mpangalatra ny hisambotra mpangalatra', barotra raha mbola ny fulcrum rehetra raharaha ezaka, io lahatsoratra io dia natao mba hamporisihana ireo izay miatrika ny andraikitra ny nabbing ratsy ry zalahy mba hijery ny zavatra 'ny alalan' ny maso 'ny mpandraharaha ny raharaham-barotra tsy ara-dalàna ..., …mampiasa barotra toy ny sehatra. "
Ireo fitaovana ny famoronana fanentanana toa ny fenitra amin'ny tany mandroso maro raha ny amin'ny 'mamela ny hafa hahafantatra' ny foto-kevitra mikasika ny tsirinaina banky sy ny olana mifandray amin'izany hafa – ny Internet (tranonkala, on-tsipika fikarohana katalaogy, ary fantatra tsara fikarohana toy ny "Google", "Bing" hanao ny fitaka). Out any, tendrena ho mpandray tsirinaina koa manatona ny “tsy miankina” na “torolalana” mpanome amin'ny dokam-barotra. Tsirin'aina mpamatsy manana toerana mba hanambara ny asa amin'ny “amin'ny fangatahana” vohikala mora jerena ny te ho mums. Web vondrona sy Registries misy ihany koa ho an'ireo izay miahy.
Ao amin'ny Nizeria, ny haavon'ny tsiambaratelo tafiditra sy ny foto-kevitra toy izany heverina ho fady amin'ny ankamaroan'ny faritra, tsirinaina fampiroboroboana ara-barotra amim-pahombiazana dia afaka maka ny endriky ny anarana avy amin'ireo-kolaka natao mba ho fantatry ny tsirin'aina mpivarotra ny intension. koa, ny fitsidihana akory va ny fahavokarana foibe mitsimoka amin'ny tanàna maro, afaka manomana ny lalana ho tsy nahasakana fanaovana fanadihadiana momba ny tena misy ny 'varotra sasany Sap'.
Na inona na inona izay rehetra nisy naneho eto, Mino aho fa ny faniriana hijanona teo amin'ny lalany ireny mbola mitohy, amin'ny ampahany ireo izay mahita varotra amin'ny tsirinaina ho 'ny mora lalan-kivoahana'. Inona no tsy tonga saina dia ny sandriny ny ela ny lalàna dia mbola Kat ampy azy ireo ao anatin'ny tontolo iray tena dia mihevitra tahaka ny tsy fantatra anarana. Toy izany mihitsy aza no mahatonga azy kokoa mampientam-po (tahaka ny inona no mitranga ao amin'ny sarimihetsika) fa misy fisondrotana-mitady ny fampiharana ny lalàna mpandraharaha, mba ho nampirisika mankany firongatry varotra ity eo amin'ny lalana.
Aoka ianao ho voalohany haneho hevitra amin'ny ""Aide-moi amin'ny Soso-kevitra Hampiroboroboana ny tsirinaina Varotra" (4)"